Warshad naxaas ah oo looxa oo jaban iyo alaableyda | Ouzhan
Brass non-ferrous metal die-casting-custom sax naxaas dhinta-shubay qaybo
In naxaas la shubay, naxaas manganis ah, naxaas aluminium ah, naxaas silikoon ah, naxaas macdanta "lead", iwm waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu darayo waxyaabo kale oo isku dhafan. Daawaha naxaasta ah ee aan ku jirin zinc maaddaama cunsurka ugu weyn si wada jir ah loogu yeedho naxaas, sida naxaasta daasadda, naxaasta aluminium, naxaasta macdanta, iyo naxaasta beryllium Heerka guud, waxaa jira 9 nooc oo ah walxaha naxaasta lagu rido, oo ay ku jiraan 29 darajo. Daarayo daawaha copper waa nooc ka mid ah wax daawaha loo shubay si ballaaran loo isticmaalo warshadaha. Alwaaxyada ku saleysan naxaasta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhismaha maraakiibta iyo warshadaha kiimikada sababta oo ah iska caabbinta wanaagsan ee wasakhda ee biyaha macaan, biyaha badda iyo xalalka kiimikada qaarkood. Sababtoo ah kuleylka wanaagsan ee kuleylka iyo xirashada iska caabbinta, aaladaha ku saleysan naxaasta ayaa sidoo kale badanaa loo isticmaalaa soo saarista gawaarida gawaarida ee mashiinno kala duwan oo qaada culeysyo culus iyo xawaare sare oo wareegsan.
Faa'iidooyinka biraha naxaasta ah ee aan birta lahayn shubay:
- kala duwan oo shubay Wide
- Waxsoosaar sareeya
OEM kartoo bir-non-ferrous adeegga dhiman-shubay adeegga-Shiinaha Shanghai naxaas qaybo aan-ferrous biraha dhinta-shubay qaybo soo saaraha
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, saxsanaanta sare ee naxaasta leh tayo xasiloon oo la isku halleyn karo ayaa lagu shaqeyn karaa. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha farsamada naxaasta dhinta. Intaa waxaa dheer, alaabada wax lagu shubo ee naxaasta ah ee la bixiyo waxay si adag ugu hoggaansan yihiin heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan ah naxaas qaybo ka mid ah dhinta-ridaya macaamiisheenna qiimaha leh.
Maxay yihiin isticmaalka qaybaha naxaasta dhiman
Faa'iidooyinka Ouzhan Brass Die Casting Service
- Dhammaan alaabada saxda ah ee wax lagu shubo ee naxaasta ah waxay ku xiran tahay kormeer tayo oo adag.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si loo sameeyo qaybo sax ah oo naxaas u dhinta.
Hore: OEM ahama qaybo ka leexashada ahama OEM
Xiga: Naxaas Custom qaybo shubay dhiman